Moto G4: falanqeyn iyo ra'yi bil kadib isticmaalkeeda | Androidsis
Jiilka afraad ee qoyska Moto G waa halkan. Motorola ayaa la yaabtay midkeeda cusub Moto G4 iyo Moto G4 Plus sababo dhawr ah awgood: shaashadeeda weyn iyo noocaas qiimaha leh ee leh sawirka faraha.
Lenovo sax ma ku tahay isbeddeladan? Ka dib bil isticmaalkeeda waxaan kuu keenay dhameystiran falanqaynta fiidiyowga ee 'Moto G4' Aniguna waxaan dhihi karaa, haddii aad rabto inaad hubiso tallaalka adigoo iibsanaya meel dhexdhexaad ah oo aan kaa niyad jabin doonin, taleefanka cusub ee Motorola ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican.
1 Moto-ka cusub ee qoyska Lenovo, oo leh Moto G4 iyo Moto G4 oo calammo ahaan ah, ayaa doonaya inuu u dagaallamo suuqa sare ee bartamaha
2 Naqshad raacaysa xariiqii kuwii ka horreeyay
4 Bandhig ka soo baxa calaamadda
5 Batariga si fiican loo hagaajiyay oo leh nidaam lacag-bixin dhakhso leh
6 Moto UI, isugeynta saxda ah
7.1 Tusaalooyinka sawirrada lala qaado Moto G4
8 Gabagabadii ugu dambeysay
10 Qodobbada waa la door bidaa
11 Qodobbada looga soo horjeedo
Moto-ka cusub ee qoyska Lenovo, oo leh Moto G4 iyo Moto G4 oo calammo ahaan ah, ayaa doonaya inuu u dagaallamo suuqa sare ee bartamaha
Moto G-kii ugu horreeyay wuxuu calaamadeeyay kahor iyo kadib qeybta, asagoo ikhtiraacay noocyo cusub oo casriyeysan oo leh astaamo wanaagsan iyo qiimayaal soo jiidasho leh runtii. Waqti ka dib shirkado badan oo soo saaraya ayaa ku booday boodhka iyagoo abuuraya nooc cusub oo dhexdhexaad ah oo suuqa ku badan, oo bixinaya khadadka taleefannada gacanta oo aad u dhammaystiran oo leh qiimo jaban, iyada oo aan laga dhaafin caqabadda nafsiga ah ee 300 euro.
Cusub Moto G4 wuxuu ujeedkiisu yahay inuu mar labaad noqdo ikhtiyaarka koowaad marka aad raadineyso taleefan wanaagsan oo Android ah marka loo eego qiimaha lacagta. Aqoonsiyadeeda waxay soo jeedinayaan in Motorola / Lenovo ay mar labaad helayaan taleefankooda cusub, in kastoo ay jiraan chiaroscuro.
Dhinaca mid waxaan leenahay cabirka shaashadda qadka Moto G4, kaas oo kordhiya ilaa 5.5 inji oo awood u leh u qalanto sida xarago. Waa run in suuqu si isa soo taraysa u tilmaamayo shaashadaha waaweyn, laakiin dhaqdhaqaaqan ay wadaan Lenovo wuxuu sababa tiro wanaagsan oo dadka isticmaala taleefannada casriga ah oo leh shaashado ugu badnaan 5 inji ah, oo hore u doortay khadka Moto G, ayaa hadda xal ka raadsada soosaarayaasha kale .
Shakhsi ahaan taas waxba kama qabo Kordhinta cabirkaXitaa waxay ka dhigayaan Moto G4 ikhtiyaar rafcaan leh haddii aad raadineyso taleefanka ugu horreeya ilmo jira 13-17, oo ka doorbidi doona shaashad weyn shaashadda loo isticmaali karo hal gacan. Laakiin arrinta iska caabbinta biyaha runtii waan tebay.
Iyo, inkasta oo qaabkii hore uu haystay shahaado IPX ah oo siiyay Moto G iska caabinta boodhka iyo biyaha, cusub Moto G4 kaliya wuxuu leeyahay buufin iyo iska caabin daadinta. Waxaa jira dad laga yaabo inay u arkaan inay wax badan ama waxtar yar u tahay in taleefanku qoyn karo dhibaato la’aan, laakiin waxaan horeyba kuugu sheegay in markii aad lahayd qaabkii hore oo ay leedahay aaladdaas, aadan jeclayn in taleefanka cusub uusan lahayn waa
Moto G4 wuxuu hayaa a naqshad la mid ah moodelladii hore, Ka dhigista balaastigga inuu yahay halyeeyo cad oo bixiya khadad aad u heer sare ah oo aan qatar la gelin marka ay timaado muuqaalka cusub.
Way cadahay in ujeedada ugu weyn ee Lenovo ay tahay in kharashka la dhigo sida ugu macquulsan si qarashka waxsoosaarku uusan sare ugu kicin. Waa run in soosaarayaasha kale ee Shiinaha ay bilaabaan inay bixiyaan boosteejoyo ay ku dhammeeyaan macdanta isla qiimaha kala duwan, Honor 5X waa tusaale cad, markaa tani waa aniga aniga meesha ugu weyn ee daciifka ah ee Moto G4.
Waan ogahay in dhammeystirku aysan ahayn barta go'aaminta adeegsadayaal badan, kuwa aan ka fiirsan faahfaahintaan, dan kama gelin doonaan taas Moto G4 ma laha jir aluminium ah. Intaa waxaa dheer, in kasta oo aysan ku jirin birta, dhammaadkeedu aad ayuu u wanaagsan yahay, gaar ahaan daboolka dambe ee Moto G4 oo leh qaab dhibco yar yar leh oo taabasho aad u jilicsan oo raaxo leh.
Mashiinka balaastigga ah ee dhalaalaya leh muuqaalka macdanta qayb ahaan wuxuu baabi'inayaa dareenka taleefanka caagga ah. Intaa waxaa dheer, jirka guud ahaan wuxuu iska caabiyaa orodka maalinlaha ah si fiican. Waxaan isticmaalay muddo bil ah iyada oo aan la helin nooc dacwad ilaalin ah taleefankuna sifiican buu kor ugu kacay.
Waxay ahayd in laga filo in shaashadeeda oo leh ilaalinta Corning Gorilla Glass ay iska caabin doonto xoqitaan kasta oo marmar ah, laakiin waxaan la yaabay markaan arkay in taleefanku uusan la kulmin daloolin ama xirneyn isticmaalka maalin kasta.
Hortiisa waxay leedahay loox yar oo weyn, waxay isku dayi lahaayeen inay keydsadaan meel yar. Faahfaahin xiiso leh ayaa la socota afhayeenka hore in kooxda naqshadeynta Motorola ay ku hayaan Moto G4. Waxaan jeclahay inaan awoodo inaan ciyaaro ciyaar kasta aniga oo aan ku dhejin dhawaaqa maqalka seddex jeer.
Dhabarka dhab ahaantii wuxuu u muuqdaa mid quruxsan labadaba isha, oo leh astaanta Motorola kaamerada hoosteeda, iyo taabashada taas ayaa ku mahadsan dhammaystirka micropotted in aan faallo ka bixinayay. Intaas waxaa sii dheer, daboolka dambe, ee laga saari karo, wuxuu leeyahay difaac ka dhigaya mid u adkeysanaya wasakhda. Halkani waa halka aan ka helno labada boos ee kaararka SIM-ka ah sida kaarka microSD. Aad u xun batteriga lama saari karo.
Su jir isku ekaysiiya aluminium sidoo kale wuxuu siiyaa taabasho wanaagsan. Dhinaca midig waa meesha ay ku yaalliin furayaasha xakamaynta mugga iyo badhanka gambaarka / dabka ee terminal-ka. Qaybta dambe waxay umuuqataa mid bir ka sameysan waxayna soo bandhigeysaa qallafsanaan ka duwan kala-xakameynta mugga.
Anigu shaqsiyan waan ka helay dareenka ah adkeynta Moto G4. Terminal-ka si wanaagsan ayaa loo dhisay iyo sidoo kale inuu aad u fudud yahay, culeyskiisu waa 155 garaam oo keliya. Dabcan, qiyaasta 153 x 76.6 x 9.8 mm, waxaan horeyba kuugu sheegayaa inaan lagu isticmaali karin hal gacan.
Faa'iidada weyn ee haysashada shaashad intaa le'eg ayaa ah in Moto G4 uu noqdo ikhtiyaar la tixgeliyo haddii aad raadineyso a dhaqaalaha phablet. Inbadan haddii aan tixgelinno qalabkeeda, taas oo, sida aad ku arki doontid falanqaynta fiidiyowga, waxay noo oggolaan doontaa inaan ku raaxeysano ciyaar kasta oo fiidiyoow ah ama waxyaabo badan oo warbaahin ah dhib la'aan.
Cabbirada X x 153 76.6 9.8 mm
Peso Gram 155
Nidaamka hawlgalka Android 6.0 Marshmallow
Screen 5.5-inch IPS oo leh xallinta pixel 1920 x 1080 iyo 401 dpi oo leh ilaalinta Corning Gorilla Glass 3
Gacaliye Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 sideed-xuddun (afar Cortex A-53 oo ku yaal 1.5GHz iyo afar koronto oo A-53 ah 1.2 GHz)
Kaydinta gudaha 16 GB lagu ballaarin karo MicroSD illaa 256 GB
Kaamirada gadaal 13 megapixel sensor oo leh autofocus / wejiga ogaanshaha / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / duubista fiidiyowga 1080p ee 30fps
Kaameradda hore 5 MPX oo leh iftiinka hore ee LED-ka iyo otomaatiga HDR
Xuduudaha kala duwan DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / A-GPS / GLONASS / BDS / 2G Bands; GSM 850/900/1800/1900; 3G band (HSDPA 850/900/1900/2100 -) 4G band 1 (2100) 3 (1800) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 19 (800) 20 (800) 28 (700) 40 (2300 )
Tilmaamo kale Nidaamka Cadaadiska Buufiska / Nidaamka Lacagta Degdegga ah
Batariga 3.000 mAh aan laga saari karin
Qiimaha 226.91 euro at Amazon
Sidii la filaayay, Moto G4 wuxuu ku gudbinayaa qoraal isagoo iskiis u bixinaya a Telefoonka xalka ah maalinba maalinta ka dambeysaa, wax la sugo ka dib markaad eegto astaamahiisa farsamo. Motorola ayaa si xoog leh ugu sharadatay dhinacan, iskudirida mid kamid ah xalka ugu caansan ee Qualcomm, kan awooda badan ee Snapdragon 617, SoC in kabadan gudashada shaqadeeda iyo, oo ay wehliyaan Adreno 405 GPU iyo 2 GB oo xasuusta RAM ah, u ogolow dhaqaaqa ciyaar kasta si dhab ah oo dheecaan ah oo shaqeynaya.
Fiidiyowga falanqaynta Moto G4, waxaad arki doontaa inaan isku dayay cayaaro fiidiyow oo kaladuwan oo u baahan awood muuqaal leh waana awooday inaan ku raaxeysto iyaga dhibaato la'aan. Marnaba wax dhibaato ah kama qabin istaagid ama dib u dhac intii aan ciyaarayay. Y Wax raad ah oo kuleyl ah oo ku yaal terminaalka.
Qadka kala saara processor-yada ugu qiimaha badan kuwa SoCs ee ku jihaysan boosteejooyinka bartamaha dhexe ayaa sii yaraanaya Awoodda qalabka Moto G4 waa tusaale cad oo tan ah.
Anigana waan layaabay tijaabooyinka waxqabadka ee lagu sameeyay Moto G4, oo isiisay qaar natiijooyin la mid ah kuwii Nexus 6. Ka taxaddar, waxaan ka hadlaynaa taleefan aan gaadhin 250 euro.
Moto G4 ayaa leh Radio FM waana la isticmaali karaa iyada oo headphones la'aanteed anteeno ahaan, ilaa iyo inta aan ku suganahay aag leh daboolid weyn, wax aan jeclaa. Ma fahmin sida telefoonadu wali suuqa ugu jiraan FM Radio la'aan.
Ma doonayo inaan xiro qaybtaan anigoon kahadlin afhayeenka hore ee 'Moto G4', oo bixiya tayo sare oo dhawaaq ah oo nagu martiqaadaya inaan isticmaalno shaashadeeda gaarka ah si aan ugu raaxeysto waxyaabaha ku jira warbaahinta badan.
Bandhig ka soo baxa calaamadda
Motorola ayaa si xoogan ugu tartameysa qaybtaan adoo siinaya a 5.5 inch screen leh tayo sannado fudud ka horaysa tartame kasta oo nooceeda ah.
Shaki kuma jiro in soo-saaruhu uu doonayay in khibrada adeegsaduhu kaamil noqdo. Oo isagu gabi ahaanba waa sax sharad on a IPS guddi gaaraya 1.920 x 1.080 pixels iyo 401 pixels halkii inji. Tayada shaashadda ee 'Moto G4' waa mid cajaa'ib leh, oo bixisa matalaad midab aad u wanaagsan oo leh midabbo dabiici ah oo aan dhereg lahayn.
Caddaankeedu waa qumman yahay, taas oo ka dhigaysa Moto G4 inay noqoto terminal akhriska ugu fiican waad ku mahadsantahay qayb ka mid ah cufnaanta sare ee pixel. Waa in la ogaadaa in adigoo yareynaya iftiinka ugu yaraan, waxaad awoodi doontaa inaad si raaxo leh u aqriso sariirta adigoon ku dhibin iftiinka shaashadda. xaglo daawasho fiican iyo isbarbar dhiga weyn, heerka dhalaalka shaashada Moto G4 wuxuu na siinayaa aragti banaanka kaamil ah, xitaa maalinta cad.
Shaki la'aan shaashadda ugu fiican ee aan ku arkay taleefan qiimahiisu ka yar yahay 300 euro.Haddii aad raadineyso terminal leh shaashad ballaaran oo tayo leh oo qiimo macquul ah ku fadhida, oo aadan dan ka laheyn inuusan laheyn aaladda sawirka faraha, I damaanad qaad in Moto G4 uu yahay ikhtiyaarka ugu fiican. Inbadan haddii aan xisaabta ku darsanno taada ismaamul la yaab leh.
Batariga si fiican loo hagaajiyay oo leh nidaam lacag-bixin dhakhso leh
Motorola waxay heleysaa qoraal aad u sareeya oo leh ismaamulka Moto G4 cusub. Isaga 3.000 mAh baytariga, aan laga saari karin, wuxuu balanqaadayaa waxqabad ka badan inta ku filan si loo taageero miisaanka buuxa ee qalabka taleefanka, laakiin ma aanan fileynin waxqabadka aadka u fiican.
Siinta isticmaalka caadiga ah taleefanka Waxaan gaadhay laba maalmood oo la isticmaalayo dhibaato la'aan, wax iga yaabiyey aniga oo tixgelinaya shaashaddiisa 5.5-inji oo leh xallinta Full HD. Waxaan ka hadlayaa adeegsi dhab ah oo shabakadda ka baaraandegaya, iyadoo la adeegsanayo shabakadaha bulshada, dhageysiga muusikada saacad maalintiiba ... taleefanka oo hab diyaaradeed la dhigo habeenkii oo la xidho codsiyada, Moto G4 ayaa ii adkaystay maalin kale oo dhan, oo la gaadhay habeenkii labaad 10 -15% sidaa darteed, iyadoo la tirinayo inay jiraan maalmo aan telefoonka aad u isticmaalno, waxaan siin karnaa ismaamul qiyaasti ah oo gaaraya 42 saacadood, wax la yaab leh taleefan leh astaamahan.
Sidoo kale ah Moto G4 waxay ku habboon tahay nidaamyada lacag-bixinta degdegga ah ee QualcommAad u xun waxaa jira xeedho caadi ah oo ku jirta sanduuqa. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan awooday inaan nidaamka ku tijaabiyo xeedho leh teknoolojiyaddan oo Moto G4 si buuxda loogu soo oogay wax ka yar saacad.
Moto UI, isugeynta saxda ah
Ma jiraan wax yar oo laga sheego qaybta software-ka ee 'Moto G4', taas oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in Motorola ay sii wadato inay ku sharraxdo isku xirnaan runti nadiif ah, oo ka duwan shirkadaha soo saarayaasha kale. Sidan oo kale, waxaan ku helnaa Moto UI, oo ku saleysan Android 6.0 M taasina waxay ilaalinaysaa khibraddii daahirsanayd ee Android ee dadku aad u jeclaa.
Isku xirka guud ahaan waxay lamid tahay google in kastoo Motorola ay ku dartay taabasho shaqsiyeed oo aan haba yaraatee dhib ku qabin. Waxaan ka arki karnaa wijidka saacadda tusaale ahaan, laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo inaysan gebi ahaanba faragelin ku jirin. Si aan fikrad kaaga siiyo, xirmada Google Play oo dhan xitaa looma sii rakibin sida caadiga ah.
Halkeen ka heli doonaa kala duwanaansho intaa ka badan? gudaha Bandhiga Ambient, Nidaamka ogeysiiska ee Motorola ee aadka u fiican oo na tusi doona waqtiga iyo ogeysiiska ku saabsan asalka madow markii la soo qaadayo boosteejada. Dhanka kale Motorola waxay isku dubaridday dhaqdhaqaaqyo dhab ah oo waxtar leh oo dareen leh. Tusaale ahaan, haddii aad xoogaa ruxdo Moto G4, kaamiradda waa la howlgelin doonaa. Falanqaynta fiidiyowga waxaad ku arki doontaa sida ay u fududahay in looga faa'iideysto fursadahaan taleefanka.
A 10 loogu talagalay Motorola qaybtaan. Ma jiraan wax ugafiican qofka isticmaala taleefanka qashinka-nadiifka ah iyo Moto G4 shaqada ayuu sifiican ugu shaqeeyaa arintan.
Halkan waxaan ku soo galeynaa mid ka mid ah qeybaha ugu muhiimsan terminalka. Waxaa marba marka ka sii dambeysa sii kordheysa muhiim ah in taleefanku leeyahay kaamirad wanaagsan runtuna waa G4 Mar kale la yaabi adoo siinaya wax qabad aad u fiican.
Kaamerada weyn ee Moto G4 waxay leedahay dareemayaal 13 megapixels oo leh fur f / 2.0 iyo autofocus, oo ay weheliso flash laba-af leh oo LED ah iyo qaab Auto HDR ah oo runtii si fiican u shaqeeya, iyo sidoo kale awood u lahaanshaha wax lagu qoro tayada HD oo dhan.
Meelaha bannaanka oo si fiican u shidan Kaamiradda Moto G4 ayaa soo qaadaysa sawirro tayo sare leh, oo bixisa cufnaan dabiici ah iyo midabbo kala duwan. Waxaa la yaab leh, qaabka HDR, oo lagu hawlgeliyay hab otomaatig ah, wuxuu si fiican u shaqeeyaa iyada oo aan la abuurin midab xad dhaaf ah oo midab leh. Waxay ku habboon tahay kuwa isticmaala kuwa doonaya inay sawirro ka qaadaan iyaga oo aan ka walwalin wax badan oo ku saabsan xulashooyinka ay taabanayaan.
Dabcan, haddii aad taqaanid sawir qaadashada waad ku raaxeysan doontaa habka gacanta taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax ka beddesho xaddiga kala duwan sida soo-gaadhista, dhalaalka, dheelitirka cad ... Haddii aadan rabin dhibaatooyin, ha ka welwelin, codsiga kaamirada ee dareenka leh ayaa kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh ugu soo qabato sawirro tayo wanaagsan leh. Xitaa adoo gacanta ku haya waxaad ku dhaqaajin kartaa kaamerada si aad dhaqso ugu qabato.
Aniga oo tixgelinayna baaxadda uu Moto G4 ku dhaqaaqayo, waxaan dhihi karaa waxay leedahay mid ka mid ah kaamirooyinka ugu fiican ee lagu arko bartamaha sare.
Tusaalooyinka sawirrada lala qaado Moto G4
Motorola aad baan ula yaabay Moto G4. Soo-saaruhu wuxuu siiyay maroojin cusub isagoo siinaya terminaal dhexdhexaad ah - oo sarreeya qiime aan lala tartami karin. 229 yuuro oo taleefan ah oo leh shaashad 5.5-inji ah, waxqabad aad u fiican oo u dhexeeya 2 maalmood? In yar oo ikhtiyaarro fiican ah ayaad ka heli doontaa qiimahaas.
Qodobbada waa la door bidaa
Bandhig leh qaab ciyaareed aad u fiican
Is-maamul-wanaag iyo nidaam lacag-bixin deg-deg ah oo fiican
Qalabka wuxuu la siman yahay Nexus 6
Kaamirada Moto G4 waxay bixisaa qabasho fiican
Qodobbada looga soo horjeedo
Kuma jiraan xeedho ku habboon nidaamka lacag-bixinta degdegga ah
Polycarbonate way dhammaataa, marka boosteejooyinka kale ee isku midka ahi hore u isticmaalaan aluminium
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Moto G4, falanqeyn iyo ra'yi bil kadib isticmaalkeeda
Waxay ahayd inaan isku dayo 3 moto g4 dhamaantoodna way kululaadeen laakiin foolxumo ayagoo isticmaalaya kaliya kaamerada iyo duubista fiidiyoow qaraar kasta sidoo kale baytariyada waa la liqay naxdin ma aysan sii waarin maxaa yeelay wax raad ah oo kuleyl ah ma saarna mana jiraan wax dhib ah hadii ay taas kugu dhacdo kuma raaxeysan karo kamaradooda ama ma ciyaari karaan ciyaaro culus maxaa yeelay wuxuu kululaa kuleyliyayaashiisa, daacad ha ahaado maxaa yeelay been ayey sheegaan, iskuday sida qofba u sameyn karo, adoo siinaya adeegsi wanaagsan kaliya ma ahan kaliya tobnaad iyo kuleylka wuxuu yimaadaa kadib 10 daqiiqo oo duubitaan ah iyo ilaa 5 ama 8 daqiiqo oo ciyaar ah
Waxaan isticmaalaa mooto g4 oo lagu daray runtiina ma kululaato ,,,,,,, mana ku dabciso mowduucyada ciyaarta ,,,,, Ma ogi taleefanka gacanta aad isku dayi laheyd laakiin aniga waxay ila tahay inaad waa qaldan yihiin hehee
sifiican ayey u socotaa, taydu waa raad raaciye, 2 wan 32 XNUMX xasuus sim ah
Ku jawaab pio calchin
Ma jiraa qof og sida loo ogeysiiyo LED-ka?
WAXAAN LEEYAHAY 2 BILOOD MOOSHARKA G4 WAANA KA BADAN YAHAY KU QANACSAN, CIYAARAHA CAAFIMAADKA AH WUXUU KU BUQAyaa, CAMERA WANAAGSAN IN HADDII AY BATRIYADU TAHAY YAR YAR.
Jawaab NELSON GOMEZ